Niady tamin’ny devoly…
Raim-pianakaviana iray maty nandoro tena tao an-tranony
Vokatry ny asan-devoly tokoa ve…? Maty nandoro tena tao an-tranony ao amin’ny fokontany Tanambao Verrerie Parisela 21/71 Toamasina, ny asabotsy maraina ny raim-pianakaviana iray 48 taona…
Avy any Vangaindrano ity raim-pianakaviana namono tena tao an-trano ity. Araka ny fitantaran’ny vavolombelona mahafantatra tsara ity raim-pianaviana ity, nilaza ho nahita ary niady tamin’ny devoly izy ny zoma alina 13 avrily hifoha asabotsy 14 avrily 2018. Tamin’ny misasakalina izy no nihetsika ary niady tamin’ilay devoly hitany. Naka vy maranitra ka nanenjika ireo devoly lazainy fahitany. Niady sady mihinjakinjaka eran’ny trano izy tamin’izany. Tena toy ireny olona miady amin’ny mpifanandrina aminy ireny mihitsy ity raim-pianaviana ity, araka ny fanazavana voaray avy any an-toerana.
Niantefa tampoka teny amin’ny loham-badiny anefa ny kapoka vy nataony tamin’ny fotoana nolazainy fa nanenjehan’ireo devoly lazainy fa manenjika azy. Vokany, naratra mafy ny loham-badiny ka nijininika ny ra. Hitan’ny fokonolona izany rehetra izany ka niezaka nitondra ilay renim-pianakaviana naratra tao amin’ny hopitaly CSB II ao Morarano ny sasany amin’ireo fokonolona. Mbola manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaly ilay renim-pianakaviana noho ny ratra nahazo azy.
Lasa saribao niaraka amin’ny trano…
Akory indray ny hagagan’ny fokonolona, ny asabotsy maraina fa nidonan-tsekotra ny tranon’izy mivady sady nijoalajoala ny afo. Niezaka namono ny afo ihany ny fokonolona teo an-tanàna, saingy tsy nisy noraisina intsony ny entana rehetra tao an-trano. Hatairana ihany koa ny an’ny fokonolona raha nahita ny fatin’ilay raim-pianakaviana efa kilan’ny afo. Tsy nisy namantarana azy intsony ny vatany iray manontolo fa mendy tanteraka tao anaty afo.
Mbola mampametra-panontaniana ny rehetra ny nahatonga ny firehetana sy ny fahafatesan’ilay raim-pianakaviana.
Efa mandeha ny famotorana ataon’ny mpitandro filaminana momba ity raharaha fandorana trano miharo fahafatesana olona ity. Aorian’izay kosa ny hamantarana ny marina momba ity raharaha ity.
Tsy vao izao fa maro ireo olona any amin’ny faritra no mihetsika karazana aretina hafahafa toy izao. Ireo mpianatra no tena matetika lasibatra ary misy fiantraikany eo amin’ny fianarana mihitsy aza izany, miankina amin’ny fihetsehan’ilay aretina.